Amafiso amin’ ny Fahagagana sy Fampisehoana ny Herin’ny Fanahy Masina ny Ministeranao by Dag Heward-Mills by Dag Heward-Mills - Read Online
Amafiso amin’ ny Fahagagana sy Fampisehoana ny Herin’ny Fanahy Masina ny Ministeranao - Dag Heward-Mills
Nahoana ny fahagagana sy ny Fanehoana ny herin’ny Fanahy Masina no hanamafy ny Asa fanompoanao
Ny fahagagana sy ny fanehoana no hany varavarana misokatra ho antsika azoantsika manatratra izao tontolo izao ho an’i Jesosy Kristy. Fahagagana sy ny fanehoana no hany varavarana misokatra ho antsika azoantsika manatratra ny havantsika, ny firenena sy ny olona ho an’ny Fanjakana. Ireo no làlana ahazoan’ny mpiasan’Andriamanitra manatanteraka ny antso niantsoany azy.
Fahagagana sy fanehoana ny Fanahy Masina no nampiasain’ny mpianatra roa ambin’ny folo sy ireo fito-polo lahy izay nirahin’i Jesosy. Mbola azontsika ampiasaina mihintsy izany eo ampanantanterahantsika ny Iraka Lehibe. Ho antsika tsirairay avy izany rehefa manomboka fantatsika sy azontsika hoe inona no efa nomen’Andriamanitra antsika.
1. Hanampy anao hahazo izao tontolo izao ho an’i Kristy ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy Masina.
Indray mandeha izay, tamin’ny navoaka ny valim-pifidianana teto an-tanindrazako dia tonga saina aho fa hay amina tapitrisa ny olona mipetraka any amina faritra lavitra be any. Marary ho an’ireny fanahy very ireny ny fon’Andriamanitra. Tsy misy antony tokony hanery antsika hiondrika amina fanerena ara-politika ka hanome fanampiana ara-tsosialy.Tsy ireny fanomezana ara-tsosialy tahaka ny sekoly na fianarana ambaratonga ambony no mahatonga antsika hahasoa ny firenena.
Ny fiangonana dia fanorenana manokana nosoran’Andriamanitra amina hery sy hosotra manokana. Amin’ny alalan’izany hery sy hosotra izany dia afaka manao izay niantsoan’Andriamanitra antsika isika. Nifidy Izy toriteny, fampianarana sy fanasitranana araka ny fombany hanampiany ny olombelona very.
2. Mahatonga anao hiala avy ao anaty aizina ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy Masina.
Mila miala avy ao anaty aizina ianao! Mila tsapa sy hita eny amin’izao tontolo izao ny asa fanompoanao! Inona no anton’ny fahendrena lehibe izay anananao, raha tsy ho re sy tsy ho hita?
Tsy dia manan-danja be manao ahoana ny tokantrano izay nitaizana an’i Jesosy, fa nanome zavatra manokana Azy Andriamanitra. Inona no nentin’i Jesosy niala avy tao anaty aizina? Inona no nahatonga ny olona nihaino ny hafany? Inona no azon’i Jesosy natao na dia tsy nisy an’izao fomba na dokam-barotra maoderina izao aza tamin’izany? Fahagagana sy fampisehoana ny herin’ny Fanahy Masina no natafavoaka an’ I Jesosy tao amin’ny aizina.
Fahagagana sy fampisehoana ny Fanahy Masina no anjaranao hialanao avy anaty aizina. Tsy mba nanoratra boky Jesosy, na nandeha fiara na nandeha fiaran-dalamby na fiaramanidina nefa kosa nalaza Izy.
Hoy ny Baiboly hoe: Ny lazany dia niely teny tontolo eny, ary ny teo an-tanànany rehetra dia tafangona teo anoloan’ny varavarany avokoa. (Marka. 1:28,33). Raha tiantsika hiangona eo ambaravaran’ny tafika masina ataontsika izao tontolo izao dia mila ny hosotra manasitrana isika.
Raha tiantsika ny olona hiangona ao amin’ny fiangonatsika dia fahagagana sy fanehoana ny Fanahy Masina no fanalahidy. Ny hosotry ny fanasitranana no hitondra ny Tanàna iray manontolo eo ambaravaranao dia ho afaka milaza ny amin’i Jesosy Kristy ianao.
3. Ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy no hahasarika olona torotoro fo maro ho ao amin’ny asa fanompoanao.
Nilaza Jesosy fa voahosotra Izy hanasitrana ny torotoro fo. Ny hoe torotoro fo dia mandratra lavitra noho ny misaraka amin’ilay ankizilahy na ankizivavy miaraka aminao.Ny fahadisoam-panantenana no mahatonga ratra-po, amin’ny ankapobeny. Maro ny olona no gaga manoloana ny zavatra nentin’ny fiainana ho azy. Mijery ny olona ianao dia toy ny hoe mety ny zavatra rehetra fa ao anaty ao izy ireny maratra, diso fanantenana sy marary aina.
Ny ankamaroan’ny olan’ny olona dia tsy sitram-panafody, na ny mpitsabo saina. Maro ny olona no mila ny kasik’Andriamanitra hitondra fanantenana ho azy. Ny zava-dehibe amin’Andriamanitra dia ny midina any amin’ny fiainan’ny olona hanasitrana ny ratram-pony.
Maro ny mpanao politika no manontany tena hoe nahoana ny olona no mbola mankany am-piangonana satria everin’izy ireny fa ny pastera dia mitango ny volan’olona fotsiny. Manotany tena izy ireny hoe nahoana ny olona no tsy mahita ny ‘famitahana’. Hitanao amin’izany fa ny olany dia tsy mazava! Mitsiky ny olona ety ivelany fa ao anatiny ao izy mitomany. Ny olona manakihana ny fiangonana dia tsy mahafantatra ny zavatra ataon’ny fiangonana ho an’ny olona.
Tsaroako nijery fanadihadiana natao tamina evenjelistra malaza iray tamina fahita lavitra.Nanaovana fanontaniana be ny amin’ny karamany, ny tranony sy ny fiarany izy. Nanao izay hahatonga azy ho fihomehezana ilay mpampandroso ny fandaharana.
Fa nony niantso ny mpihaino dia nisy rangahy iray izay nangataka vavaka. Tampotampoka teo niova ny rivotra. Ilay rangahy niantso hay nanana kansera ary efa ho faty. Tiany hivavaka ho azy ilay evanjelistra. Ireo fanontaniana feno fiahiahiana rehetra nataon’ilay mpampandroso dia nanjary tsy nisy dikany avokoa. Miatrika mpiantso anaty fahaporetana, sy feno ranomaso izay mitady vavaka mafy ilay mpampandroso teo. Ary ilay evanjelistra ihany no afaka nanome fanampiana. Nanjary niharihary sy nazava tamin’ny rehetra ny mahailaina ny asa fanompoan’ilay evanjelistra.Vao nihanitombo ny olona niantso nangataka vavaka ho an’ny fahaporetany sy ny toe-javatra izay tsy misy fanantenana intsony.
Be ny filan’ny olona ary ny hosotry ny fanasitranana ihany no mitondra vaha-olana. Rehefa anananao ilay hery misy fahagagana sy fampisehoana avy amin’Andriamanitra dia hitangorona eo aminao ny olona torotoro fo.
4. Ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy Masina no mahatonga ny asa fanompoanao misy dikany amin’ny fiaraha-monina.
Ny hoe: misy dikany dia midika hoe zava-dehibe . Manjary misy dikany amin’izao tontolo izao isika rehefa miasa ny hosotry ny fanasitranana. Rehefa tafarina indray ny maratra fo, voatory amin’ny mahantra ny filazantsara dia amin’izay isika no misy dikany. Mampahory ny olona ny fanahy ratsy ary mitondra tahotra amin’ny fiainany. Fa ny hosotry ny fanasitranana no mitondra fanafahana ho an’ny olona.
Be ny firenena izay voafehin’ny tahotra sy ny finoanoampoana.Amin’ny alalan’ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy Masina no andravana ny ozona sy ahatongavan’ny fanasitranana. Be ny mino ny mahagaga. Raha manana ny hosotry nyfanasitranana ianao dia hahajoro eo anantrehan’ny tera-tany izay manandrakandrana ny herin’ilay ratsy ka hiaiky azy. Raha ny toriteny amin’ny alahady fotsiny no anananao, dia ataon’ny mpamosavy sy ny mpanandro amin’izao andro izao tsy misy dikany ianao.
Be ny finoanoampoana ety amin’ny tontolontsika. Misy renirano izay tsy azo anjonoana. Indraindray ny olona dia tsy mahazo matsaka amin’ireny renirano ireny. Misy toerana tsy azo anaovana fefiloha noho ny finoanoampoana. Maro be ny zavatra atahotahoran’ny olona fotsiny amin’izao. Noho ny finoanoampoana dia matahotra isika hanao akanjo anankiray amin’ny fotoana iray. Tsy afaka mametraka jiro eny amin’ny lalambe ianao satria hono misy andriamanitra eny. Misy ny olona tsy sahy mandeha amina lalana iray amin’ny fotoana iray. Misy matahotra ny mamono jiro. Misy ny olona matahotra ny manao dia rehefa zoma. Misy karazana finoanoampoana manodidina ny laharana faha -13n’ny volana. Ary raha zoma ny faha-13n’ny volana dia vao miha loza. Na ny fiara manidina aza dia mahalala izany. Misy ny fiaramanidina sasany tsy manana seza mitondra ny laharana faha-13. Misy amin’ireny tranobe misy toeram-ponena ireny no tsy manana rihana faha-13. Indray andro aho nandeha fiaramanidina. Tsy dia nisosa mora ny fipetrahany tamin’ny tany dia niala tsiny ny mpamily ary nilaza fa ny antony dia zoma faha-13 hono ny andro!
Mamindrà fo ! Marobe ny olona miaina anaty tahotra.
Manjary misy dikany ny fiangonana rehefa manana zavatra omena ny olona izy. Manjary misy dikany isika rehefa afaka manome ny olona ny zavatra ilainy. Tsy misy fitondram-panjakana afaka manome izay omen’ny fiangonana avy amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina. Tsy misy mpahay politika mahay manome izay omen’ny fiangonana. Tsy misy na mpampianatra na mpitsabo ka afaka manome izay omen’ny fiangonana. Andriamanitra irery ihany no afaka manasitrana ny fo maratra sy mamonjy olona. Ny faritra rehetra eran’izao tontolo izao dia mila ny fahagagana sy ny fanehoana ny Fanahy Masina.
Ny mampisy lanjany ny fiangonana dia tsy amin’ny fanaovana sekoly na oniversite. Ny fitondram-panjakana no tokony hanome toeram-pianarana. Raha manao toeram-pianarana ny fiangonana dia tokony ho hita toy izao ny fandraisana izany - fanomezana araka ny fo ho an’ilay firenena. Ny famonjena ny olombelona dia efa nataon’i Jesosy Kristy tamin’ny alalan’ny hazo fijaliana.
Nomena andraikitra ny amin’ny Iraka Lehibe isika. Tsy misy fikambanana hafa izay nomena io andraikitra io. Ny maha-zava-dehibe antsika dia amin’ny fitoriana sy fampianarana momba an’i Jesosy. Ny maha-zava-dehibe antsika dia ny amin’ny fanasitranana. Ny maha-zava-dehibe antsika dia amin’ny fanaovana fahagagana sy ny fampisehoana ny herin’ny Fanahy Masina.
5. Ny fahagagana sy ny fampisehoana ny Fanahy no mitarika ny olona babo ho ao amin’ny fiangonanao
Maro ny olona voafehin’ny devoly. Nisy namako izay, indray andro tena niaina tao anaty zava-mahadomelina. Nalahelo be aho. Ny herin’Andriamanitra ihany no afaka manafaka ny olona amin’ny zava-mahadomelina, amin’ny alikaola, sy amin’ny toe-tsaina vetaveta. Maro ny olona voafatotra. Tsy mahafaka ny tenany izy ireny. Fa ny hosotry ny fanasitranana ihany no hanafaka ny olona amin’izay zavatra rehetra manan-devo azy.
Ny fahagagana sy ny fanehoana ny Fanahy no afaka hitondra fanantenana ho an’ny vehivavy momba. Sendra nijery fandaharana tao amin’ny fahita lavitra aho indray mandeha, ary tamin’izay dia mba ho fikarakarana ilay ramatoa tsy niteraka dia nampidirana bibilava tao aminy. Voatery nandeha tany amina mpanao fanafody izy ary dia izay no ala-olana nomeny azy hananany zanaka.
Dia hoy aho tamiko: Ny olana momba ny fahamombana dia mihoatra lavitra noho izay takatry ny saina. Matahotra bibilava daholo isika tsy sahy manatona, eny fa na dia mihidy aza izy ireny. Marikoditra isika na dia ny mahita azy ireny amin’ny fahita lavitra aza. Ny fahitana vehivavy iray manaiky ampidirana bibilava anatiny mba hananany anaka, dia mampiseho miharihary ny tena filàny.
Manontany ny olona hoe nahoana aho no nandao ny mahadokotera ahy ka nandeha nitory teny. Lasa eritreritra ry zareo hoe misy lanjany kokoa ve ny ataoko amin’ny maha mpitory teny ahy. Ny ataoko amin’izao fotoana izao dia lehibe lavitra noho ny mahadokotera ahy. Raha ho afaka nanampy izao tontolo izao tamin’ny alalan’ny fanafody Jesosy, dia ho nanao dokotera Izy. Fa nanao mpitory teny Izy, ary milaza zavatra lehibe izany!
Nanambara Jesosy fa tonga Izy hanafaka izay mijaly.Mijaly ny olona iray satria marary izy. Feno fanaintainana, ratra, sy fahadisoam-panantenana ny fiainana, ary ny hosotry ny fanasitranan’i Jesosy no manasitrana ny marary sy mijaly.
Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, Sy fampahiratana amin’ny jamba, Hanafaka izay nampahorina,
Nanasitrana ny ranon’ny tanàna iray Elisa satria nisy zavatra tsy nety tamin’ilay rano.
Ary hoy ny mponina tao amin’izany tanàna izany tamin’i Elisa: Masina hianao, indro, tsara toerana ity tanàna ity, tompoko, araka izao hitanao izao, saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampahavanon-anaka. Dia hoy izy: Itondray lovia vaovao aho, ka asio sira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nankany amin’ilay niandohan’ny rano izy, dia nanipy sira tao ka nanao hoe: Izao no lazain’i Jehovah: Efa nahatsara ity rano ity Aho; tsy hisy fahafatesana na tsi-fahavanonan-anaka intsony hiseho eto. Ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataon’i Elisa. (2 Mpanjaka 2:19-22).
Rehefa manasitrana ny ranonao Andriamanitra dia manome izay tena filàna fototra eo amin’ny fiananao Izy,mampiseho aminao Andriamanitra fa maro ny olona mahantra eo amin’izao tontolo izao. Misy olona tsy mahita fanasitranana ho an’ny aretiny. Any amin’ny firenena mahantra, misy ny vehivavy indraindray izay miteraka eny ampototry ny hazo. Ary izay indrindra no antony nanosorana antsika hitory ny Filazantsara amin’ny mahantra.
Be lavitra ny mahantra eto amin’izao totolo izao noho ny manakarena. Sarihin’Andriamanitra hijery ireny mahantra ireny ny saintsika. Tsy afaka mamangy ireny mahantra ireny ianao sy hiresaka aminy raha tsy manana vaovao tsara omena azy. Te-hafantatra ry zareo hoe ahoana no ahafahan’ny Filazantsara misy vokany azo tsapain-tanana eo amin’ny fiainany. Ahoana ny ahatakarany ny foto-kevitry ny Filazantsara ao anatin’ny olany, ny aretiny sy ny fahantrany miompampana?
Mila mivavaka isika mba hisy fahagagana bebe kokoa. Mila maniry fahagagana bebe kokoa ny fontsika! Fa raha tsy izany, dia manohy mipetraka amin’ny toerana kely misy antsika eo isika nefa be ny vahoaka mankany amin’ny helo!
6. Ny fahagagana sy ny fampisehoana’ny Fanahy dia manamafy ny toeran’Andrimanitra eo amin’ny asa fanompoanao.
Nihikiaka i Jeremy Sitrano aho Tompo o, dia ho sitrana! Rehefa manasitrana anao Andriamanitra dia tena sitrana ianao! Rehefa Andriamanitra no mamonjy anao dia tena voavonjy ianao! Tsy ampy be mihintsy ny fomba fanasitranan’ny olombelona. Fa amin’ny alalan’ny hosotry ny fanasitranana, dia hanamafy ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny olona ianao.
Ny hoe Andriamanitra manasitrana dia tsy midika hoe tsy mankasitraka ny fanasitranana ara-tsiansa Izy. Tsy manohitra ny fitsaboana Izy. Ny marina aza dia Izy no nanome saina ny olombelona mba hahafahany manamboatra fanafody. Izy no loharano nipoiran’io fanomezana io. Amin’ny mahadokotera ahy, dia mino ny fitsaboana ara-tsiansa aho. Misaora an’Andriamanitra ny amin’ny fitsaboana ara-tsiansa sy ny amin’ny dokotera. Tena mila azy ireny isika.
Na izany aza anefa dia, manan-javatra mihoatra ny fitsaboana ara-tsiansa ho antsika Andriamanitra. Afaka manao izay vitan’ny fitsaboana ara-tsiansa Izy. Fa koa, afaka manao izay tsy vitan’ny fitsaboana ara-tsiansa Izy. Fa indraindray, Izy dia manao zavatra izay hain’ny fitsaboana ara-tsiansa. Ny hany fantatsika dia tsara ny zavatra ataony.
Tiako ny mitantara ny tantarana rangahy iray izay voavonjy tamina horohorontany tany San Fransisco. Nalaina am-bavany izy taorian’ny horohorontany. Nandritra ny telo andro sy telo alina izy dia tavela tany ambany potika tany sy vato nianjera. Nanontaniana izy hoe ahoana no fomba nahavelomany nandritra izany fotoana lavabe izany.
Namaly izy hoe, Izaho dia olon’ny finiavana be. Rehefa tapa-kevitra ny hanao zavatra aho dia tsy misy mahasakana ahy. Afaka manohy ny lalako aho! Tsy mivily ho amin’ny havia na ho amin’ny havanana. Olona mahery amin’ny fanapahan-kevitra sy ny finiavana anaty aho ka dia nandà ny ho faty fotsiny izao! Vonona ny hiaina aho ary dia izay no inoako fa nahavelona ahy!
Nalaina am-bavany koa ny vadiny. Dia hoy izy, Eny, fantatro ny vadiko ary an-taonanay maro no efa nivadianay. Olon’ny finiavana be izy! Rehefa tapa-kevitra ny hanao zavatra izy dia tsy misy afaka mamily azy na ho amin’ny havia na ho amin’ny havanana. Tsy mora miova hevitra izy! Manana fahavononana be izany izy. Mahatanteraka ny fikasany izy. Mandroso izy amin’ny zavatra ataony. Izy dia olona tsy mihemotra na misy aza ny fahoriana. Fantatro tsara izy! Fito amby roa-polo taona izao no nivadianay, rehefa tapa-kevitra izy hoe mbola ho velona, dia velona izy.
Nalaina am-bavany koa ny dokoteran’ilay rangahy ity. Nanontaniana izy hoe: Inona no ambaranao mikasika ity rangahy ity izay nandresy tamin’ny fomba mahagaga? Namaly izy hoe: ‘Eny, fantatro izy. Olon’ny finiavana be izy! Nandresy izy satria ny finiavana dia zava-dehibe amin’ny fiainan’ny marary. Rehefa ny marary no manapa-kevitra ny ho faty dia maty izy. Rehefa izy no manapa-kevitra ny ho velona dia velona izy."